Xubinnimo - Word Foundation • Noqo xubin
Dad badan ayaa xubno ka noqda Word Foundation sababta oo ah jaceylka ay u qabaan buugaagta Percival, saameynta qotada dheer ee shaqada Percival waxay ku yeelatay noloshooda iyo rabitaanka inay nagu taageeraan inaan gaarno akhriste ballaaran. Si ka duwan ururada kale qaarkood, ma lihin macallin, macallin ama guddoomiye. Ujeeddadayada iyo ballanqaadkeennu waa inaan ogeysiinno dadka dunida ugu weyn ee Percival, Fikirka iyo Dareenka, iyo waliba buugaagtiisii ​​kale. Waxaan diyaar u nahay inaan bixinno xoogaa hagid ah, haddii la codsado, laakiin waxaan sidoo kale taageersanahay xigmadda is-xukunka - barashada kalsoonida iyo kaqeybgalka awoodda gudaha ee qofka. Buugaagta Percival waxay u noqon karaan hage gacan ka geysanaya howshan.
Dhamaan xubnaha ka tirsan The Word Foundation, iyada oo aan loo eegin heerka taageerada aad dooratay, waxay heli doontaa majalladeenna quarterly, Word The (Tusaale Muusiko). Xubnuhu waxay sidoo kale helayaan 40% dhimis buugaagta Percival.
Word Foundation waxay taageertaa barashada buugaagta Percival. Iyadoo loo marayo joornaalkeena seddex-biloodlaha ah, Ereyga, waxaan u abuurnay meel aan ku ogeysiinno akhristayaashayada jidadka kala duwan ee daraasadda. Marka qofku xubin ka noqdo Aasaaska Aasaaska, macluumaadkan waxaa laga heli karaa joornaalkayaga:
• Liiska xubnaha ka tirsan kuwa xiiseynaya inay wax la bartaan dadka kale.
• Cawin laga bilaabo Word Foundation oo loogu talagalay kuwa doonayaan inay ka soo qaybgalaan ama abaabulaan kooxaha daraasaadka ee bulshadooda.
Hal nolol oo dunida ah waa qeyb ka mid ah taxane ah, sida hal cutub oo ku jira buug, hal tallaabo oo ku saabsan riwaayad ama hal maalin noloshiisa. Fikradda fursadda iyo in hal nolol oo dunida ah waa labo ka mid ah qaladaadka aadka u xun ee aadanaha. HW Isboortiga